Universal Adjustable Car Cup Holder Cellphone Mount Stand ကိုဝယ်ပါ၊ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါ | WoopShop®
Universal Adjustable Car Cup Holder ဆဲလ်ဖုန်း Mount Stand
$24.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $39.99
Universal Adjustable Car Cup Holder ဆဲလ်ဖုန်း Mount Stand backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Charger - မရှိပါ
အင်္ဂါရပ်များ၊ ဖုန်းများအတွက် Universal Car Cup Holder၊ ချိန်ညှိနိုင်သည်
လိုက်ဖက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်: Universal, Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi
နာယကရှိတယ် - မဟုတ်ဘူး
ပုံစံ - မိုဘိုင်းဆဲလ်ဖုန်းများအတွက်ဆဲလ်ဖုန်း၊ မတ်တပ်ရပ်နိုင်သော Universal Car Cup Holder၊ Huawei Samsung အတွက် Mount
3.5 "-6.5" ဆဲလ်ဖုန်းအတွက်ချိန်ညှိနိုင်သော Angle Neck Holder
119 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ဖော်ပြချက်အတိုင်းပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ငါပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မြန်ရောက်လာတယ်။ ငါအရမ်းကျေနပ်တယ် !!
အရမ်းလန်းတဲ့ကိုင်ဆောင်သူ။ ပလက်ဖောင်းကိုကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါသောပလက်ဖောင်းနှင့်အစားထိုးခဲ့သော်လည်းယခုအခါပြဿနာလုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းသည်အားပြင်း။ မတုန်လှုပ်ပါ။
ငါအဲဒါကိုကြိုက်တယ် exatamente como eu esperava amei